अनलाइन कक्षा वा वर्क फ्रम होमका लागि ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी विषयहरुमा ध्यान दिनुहोस् - Technology Khabar
» अनलाइन कक्षा वा वर्क फ्रम होमका लागि ल्यापटप किन्दै हुनुहुन्छ ? यी विषयहरुमा ध्यान दिनुहोस्
विश्वमा स्मार्टफोनपछि ल्यापटप दैनिक प्रयोगको रुपमा आउने गरेको छ । कलेजमा प्रोजेक्ट बनाउने काममा होस वा व्यवसाय वा अफिसको कामका लागि ल्यापटप अनिवार्य जस्तै भईसकेको छ ।
अझ विश्वभर कोरोनाभाइरसको महामारीले गर्दा घरबाटै अनलाइन कक्षा लिने होस वा घरबाटै कार्यालयको काम गर्ने हरेक समय ल्यापटप अत्यावश्यक भईसकेको छ । त्यसैले गर्दा विश्वभर ल्यापटपको माग र बिक्री बढिरहेको छ ।
ल्यापटप किन्नेबेलामा यो ध्यानमा राख्नुस कि ल्यापटपमा अपरेटिङ्ग सिस्टम वा बेसिक अपरेटिङ्ग सिस्टम राखिएको छ । यदि ल्यापटपमा अपरेटिङ्ग सिस्टम छैन भने तपाईँले किनेपछि छुट्टै अपरेटिङ्ग सिस्टम राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि छुट्टै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ल्यापटप किन्ने बेलामा यो ध्यानमा राख्नुस की यो अपरेटिङ्ग सिस्टमसहित आउँछ की आउँदैन् । सकेसम्म अपरेटिङ्ग सिस्टम सहित ल्यापटप किन्नुहोस् ।
अपरेटिङ्ग सिस्टमको छनौट गर्दा तपाईँलाई आवश्यक पर्ने किसिमको अपरेटिंग सिस्टम प्रयोग गर्नुहोस् । अधिकतम रुपमा माइक्रोसफ्टको अपरेटिंग सिस्टम प्रयोग हुने गरेको छ भने त्यसबाहेक लिनक्स, गूगल, एप्पलको अपरेटिंग सिस्टम पनि किन्न सकिन्छ । तर सजिलोको लागि माइक्रोसफ्टको अपरेटिंग सिस्टममध्ये विण्डोज सेभेन, विण्डोज ८, विण्डोज १०, एप्पलको अपरेटिंग सिस्टम, गूगल क्रोम ओएस, उबन्टुपनि उपलब्ध छन् ।
यसबाहेक तपाईँले ल्यापटपका साथमा आउने एसेसरिजको क्वालिटीहरु पनि परिक्षण गर्नुहोस् । र त्यो आफूले सहजरुपमा प्रयोग गर्न सकिने किसिमको छ वा छैन भन्ने जानकारी राख्नुस् । त्यस्तै ल्यापटपमा कतिवटा र कस्तो प्रकारको पोर्टहरु राखिएका छन् । के के एसेरिजहरु कस्तो अवस्थामा आउँछन र आफूलाई प्रयोग गर्ने किसिमका छन वा छैनन् । थप एसेसरिजहरु के के चाहिन्छ इत्यादीको बारेमा समेत जान्नु पर्दछ ।
वारेन्टी वा मर्मत सेवा
ल्याटप किनेर मात्र हुँदैन त्यसमा भएको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी लगायतका विषयमा बुझ्नुहोस् । कति समयमा मर्मतको सेवा वा आफ्टर सेल्स सेवा उपलब्ध छ वा छैन् । यसमा कस्ता किसिमका मर्मतका सेवाहरु प्राप्त हुन्छन भन्ने बारेमा जानकारी लिनुहोस् ।